15 / 04 / 2021 15 / 04 / 2021 ခရစ် Wharfe 1165 Views စာ0မှတ်ချက် 71721 ဦး ခေါင်းခွံမျှောဆရာရဲ့နဂါး, 71722 ဦး ခေါင်းခွံမျှောဆရာ, 71747 The Keepers '' ကျေးရွာ, မီဒီယာချက်ချင်း, ကျွန်းဂျေး, Lego, Lego Ninjago မဂ္ဂဇင်း, တောင်၏မာစတာ, Ninjago, NINJAGO ရာသီ 14, ဦး ခေါင်းခွံ, အဆိုပါကျွန်း, Zane
၏ပြ74နာ XNUMX Lego Ninjago မဂ္ဂဇင်းကိုယခုအခါရရှိနိုင်ပါသည်။ လူကြိုက်များသော Skull Sorcerer အပေါ်သင်၏လက်ကိုရယူရန်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းကိုပေးပါသည်။
ဒီရန်သူသည်ပြီးခဲ့သည့်နွေရာသီက Master of the Mountain subtheme တွင်ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်၊ 71721 ဦး ခေါင်းခွံမျှောဆရာရဲ့နဂါး နှင့် 71722 ဦး ခေါင်းခွံမျှောဆရာ။ အကယ်၍ ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုခုကိုသင်လက်မကိုင်နိုင်သေးပါကနောက်ဆုံးပေါ်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်စာစောင်ကိုသင်ရှာဖွေချင်လိမ့်မည် Lego Ninjago မဂ္ဂဇင်း။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အစိမ်းအနက်ရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်မကောင်းတဲ့ဟာကိုပြီးခဲ့သည့်လကသီးသန့် Zane minifigure ကနေပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်ဆိုးရွားသည့်အစိမ်းရောင် baddie ကိုမျက်နှာဖုံးတွင်အရံတပ်ထားသော freebie အဖြစ်ပူးတွဲထားသည်။ သငျသညျဖွငျ့ဤ - အနည်းငယ် - အခြားဗားရှင်းအားဖြင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် ဒီနေရာမှာကိုနှိပ်ခြင်း.
အဖြစ်အဖုံးပေါ်တွင်အခမဲ့ minifigure, ထုတ်ပေး 74 ၏ Lego Ninjago မဂ္ဂဇင်းတွင်ပုံမှန်ပရိသတ်များနှင့်ဖျော်ဖြေမှုများ၊ ပဟေlesိများ၊ ပိုစတာများနှင့်ကာတွန်းများပါဝင်ပြီးလူငယ်ပရိသတ်များအားဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပေးပြီးနောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အကြီးမြတ်ဆုံးကိုအာရုံစူးစိုက်စေသည်။ Ninjago အစုံ - အလွန်အထင်ကြီးအပါအဝင် 71747 The Keepers '' ကျေးရွာ.
ဒီဟာကမင်းကိုဖြတ်သန်းသွားနိုင်တဲ့နောက်ဆုံးသောတောင်၏ဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည် Lego Ninjago ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Issue 75 ဟာ Season 14 ရဲ့ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့aနဲ့သွားနေလို့ပါ အခမဲ့ကျွန်းဂျေး။ သက်ဆိုင်တဲ့အစုအစုံစင်ပေါ်သာထိမှန်ခဲ့သည်ကိုထောက်။ ဒါဟာတော်တော်ဆွဲဆောင်မှုပါပဲ။
မေလအစောပိုင်းတွင်ကောင်းမွန်သောလက်လီအရောင်းဆိုင်များသို့ရောက်သွားရန်ထိုကိစ္စကိုသတိပြုပါ။ ဤအတောအတွင်း၊ ထုတ်ကုန် ၇၄ ကိုစူပါမားကတ်များနှင့် newsagents များတွင်ပေါင် ၃.၉၉ ဖြင့်သာရသင့်သည်၊ သို့သော်ယူကေတွင်သာတရားဝင်ဖြစ်သည်။ Lego Ninjago မဂ္ဂဇင်းကိုအမေရိကန်တွင်မထုတ်ဝေပါ
← LEGO Super Mario 71383 Wiggler ၏အဆိပ် Swamp ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လာမည့်လ၏ LEGO NINJAGO မဂ္ဂဇင်းတွင်အခမဲ့ကျွန်းဂျေး minifigure ကိုရယူပါ →